Inona no maha samy hafa ny Calvinism sy ny Arminianism? ➡️
Inona no maha samy hafa ny Calvinism sy ny Arminianism?
Inona no maha samy hafa ny Calvinism sy ny Arminianism? Calvinism sy Arminianism dia onjam-pisainana roa ao anatin'ny Kristianisma izay fiezahana hanazava ny fifandraisana misy eo amin'ny famonjena, ny fiandrianan'Andriamanitra ary ny herin'ny olombelona hisafidy. The calvinisma mifantoka bebe kokoa amin'ny fiandrianan'Andriamanitra sy ny arminianism mifantoka bebe kokoa amin'ny safidy malalaka. Miresaka momba azy roa ny Baiboly.
1 Ny niandohan'ny adihevitra
2 Inona no maha samy hafa ny Calvinism sy ny Arminianism?
3 Iza no marina?
Ny niandohan'ny adihevitra
Calvinism sy Arminianism nitsangana tamin'io fotoana io. Ny kalvinisma dia mifototra amin'ny hevitry ny lehilahy iray antsoina hoe anarany John Calvin ary ny Arminianism dia mifototra amin'ny eritreritr'i Jacob Arminius. Ny mpanaraka an'ireto roalahy ireto dia manana (ary mbola manana) ady amin'ny tsy fitovizan'ny toerana misy azy ireo.
Rehefa nanjary nalaza ny Calvinism, ny mpanaraka ny Arminianism dia nanoratra momba ny teboka sasany izay tsy nifanarahan'izy ireo tamin'ny Kalvinista. Ireo kosa, nanamafy ny toerana misy azy ireo ho setrin'izany. Nanomboka teo izany ny adihevitra lehibe izay naharitra an-jato taonany maro.
Ny tena maha samy hafa ny Calvinism sy ny Arminianism dia ny fomba fiasan'ny famonjena. Nilaza i Calvinism fa tsy manan-tsafidy amin'izany isika; Arminianism milaza fa afaka misafidy isika.
calvinisma ampianaro izay Andriamanitra no manana fiandrianana amin'ny zavatra rehetra. Noho izany dia mifidy izay olona tiany hotehirizina izy. Tsy misy afaka mamonjy ny tenany amin'ny safidiny malalaka, satria isika rehetra dia voafandriky ny ota. Fa Andriamanitra dia manome finoana sasany mba hovonjena. Tsy misy olona nofidin'Andriamanitra afaka hanohitra ny famonjena; ny rehetra dia ho voavonjy an-tery.
"Tahaka ny nifidianany antsika ho Azy talohan'ny nahariana an'izao tontolo izao, mba ho masina sy tsy manan-tsiny eo alohany isika,
amin'ny fitiavana, rehefa notendreny rahateo isika hanjary zanany natsangana tamin'ny alàlan'i Jesosy Kristy, araka ny fitiavana ny fony tsy misy fangarona,
ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany, izay nanasoavany antsika tao amin'ny Malala »
Efesiana 1: 4-6
Arminianism ekeo ny fiandrianan'Andriamanitra ary ny hoe tsy misy afaka mamonjy ny tenany amin'ny ezaka ataony. Manolotra famonjena antsika maimaimpoana Andriamanitra, nefa koa manome safidy ny olona tsirairay. Tsy misy olona voatery mino ka voavonjy.
Indreo, mijanona eo am-baravarana aho mandondona; Raha misy mandre ny feoko ka mamoha varavarana, dia hiditra ao aminy aho hiara-misakafo aminy, ary izy amiko.
Apokalypsy 3: 20
Ny tsy fitoviana hafa dia ny hoe iza Jesosy no tonga hamonjy. ny Mampianatra i Calvinism fa Jesosy dia maty hamonjy ny olom-boafidy ihany, Andriamanitra dia nifidy azy ireo hanana finoana. ny Mampianatra ny Arminianism fa maty ho an'ny olona rehetra i Jesosy, fa izay mino ihany no hovonjena.
Na izany aza, ny ankamaroany Ny Kalvinista dia tsy mino fa "saribakolin'Andriamanitra" isika. Manaiky izy ireo fa manana fahefana handray fanapahan-kevitra isika, saingy tsy amin'ny resaka famonjena. Ny ankamaroan'ny mpanaraka ny Ny Arminianism koa dia tsy mino fa voavonjy amin'ny asa na fahamendrehana isika. Manaiky izy ireo fa an 'Andriamanitra ny famonjena; fotsiny manana fahefana handà izany famonjena izany isika.
Anisan'ireo Kalvinista sy mpanohana ny Arminianism dia misy koa a adihevitra momba ny fahafahan'ny mpino very famonjena. The Nilaza i Calvinism fa tsy azo atao izany. Etsy ankilany, milaza ny Arminianism fa mety ho azo atao izany, saingy tsy misy azo antoka.
Tsy misy valiny mazava momba io fanontaniana io. Milaza ny Baiboly fa manana fahefana amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra, fa afaka misafidy koa isika. Tsy misy zavatra mitranga raha tsy avelan'Andriamanitra, fa ny olona koa manao zavatra tsy tian'Andriamanitra.
Ny resaka famonjena dia mitovy amin'ny resaka akoho sy atody. Iza no voalohany? Ny sitrapon'Andriamanitra sa ny finoany? Tsy mamaly ny Baiboly! Andriamanitra dia tsy voafetra amin'ny fitsipiky ny fotoana, aloha sy aoriany. Mandrakizay izy io ary afaka miverina, mandroso ary amin'izay làlana mety amin'ny fotoana. Misy dikany ve ny ezahina hazavaina amin'ny fomba ara-nofo ny asan'Andriamanitra?
Milaza izany ny Baiboly Andriamanitra no mifehy ny zava-drehetra. Saingy, amin'ny fiandrianany, mamela antsika handray fanapahan-kevitra. Nampitandremana isika mba tsy handà ny famonjena natolotr'Andriamanitra antsika, fa mahazo antoka koa isika fa hitazona antsika amin'ny finoana Andriamanitra.
Es tsy afaka hanambara fa marina ny lafiny iray, fa ny Baiboly tsy manazava. Ohatra, ny andininy ao amin'ny Jaona 3:16, Azo ampiasaina hanaporofoana fa maty ho an'ny olom-boafidy mino ihany i Jesosy ary koa hanaporofoana fa maty ho an'ny rehetra i Jesosy fa izay mino ihany no voavonjy satria milaza fotsiny ilay andininy fa ireo mino an'i Jesosy dia hovonjena ary tsy mifantoka amin'ny ity karazana pitsopitsony ity.
Mampalahelo fa matetika no mitranga ny olona toa manam-pinoana mandao an'i Jesosy. Araka ny Calvinism, ity olona ity tsy nanana finoana marina, ka tsy ho voavonjy tokoa. Araka ny Arminianism dia mety ho porofo izany azo atao ny mamoy ny famonjena raha tena te-handà an'i Jesosy ny olona.
Ny Baiboly dia milaza fa misy olona manandrana an'i Jesosy, nefa mandà azy avy eo. Na izany aza, tsy voalaza ao raha hovonjena ireo olona ireo na tsia. Noho izany, ny tena zava-dehibe dia ny mandrakizay.
Satria tsy azo atao mihitsy ireo izay nohazavaina sy nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra ary nanjary mpandray anjara tamin'ny Fanahy Masina,
ary izy ireo koa dia tia ny teny tsara sy ny herin'ny fiainana ho avy,
ary niverina izy ireo, nanjary navaozina indray ho amin'ny fibebahana, nanombo ny Zanak'Andriamanitra indray tamin'ny hazo fijaliana ary nampiharihary azy vituperation.
Heb. 6: 4-6
Izany no izy! Antenainay fa nahasoa anao ity lahatsoratra ity inona ny mahasamihafa ny calvinism sy ny arminianism. Raha izao dia te hahalala ianao inona ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny katolika sy ny protestanta, manohy mizaha Discover.Online.